Raharaha fonjan'Ambositra :: Nafindra toerana ilay vehivavy notorian’ireo gadra nitsoaka • AoRaha
Raharaha fonjan’Ambositra Nafindra toerana ilay vehivavy notorian’ireo gadra nitsoaka
Tsy vita teto an-drenivohitra ny fanolorana ny Fitsarana an’ ilay vehivavy notorian’ny gadra nitsoaka tany amin’ny fonjan’ Ambositra. Fisandohana ny anaran’ny vadin’ny Filoham-pirenena no anenjehana azy, ka araka ny loharanom-baovao akaiky ny mpanao famotorana eny amin’ny Zandarimaria misahana ny heloka bevava dia efa nalefa any Ambositra, toerana onenany, io vehivavy io. “Any no tohizana ny famotorana ”, hoy ny fanampim-panazavana.
Misafotofoto ity raharaha misaringotra amin’ny fitsoahana gadra telo tao amin’ny fonjan’Ambositra, tamin’ny 2 jolay lasa teo ity. Iry vehivavy iry ihany no nitory sy nahatonga ny didim-pitsarana fampidirana am-ponja azy telo ireo, noho ny hosoka sy fampiasana hosoka ary fakàna an-tsokosoko ny vola fanao an-tratra (provision) tao amin’ny kaonty amin’ny banky iray.
Mitohy ny fikarohana an’ireo gadra telo ireo, miaraka amin’ ny lehiben’ny fonja sy mpandraharahan’ny fonja iray any Ambositra. Notazonina nandritra ny andro maromaro teny Fiadanana ilay vehivavy ary efa natolotra ny Fitsarana ny antontan-taratasy tamin’ny fanadihadiana, no izao nafindra any Ambositra izao ny fanohizana ny famotorana momba azy.
Firehetana tany Mampikony :: Fivarotam-panafody sy trano lehibe efatra ravan’ny afo